कलम समाउन सिक्ने हातहरूले चुरोटका खिली समाउन सिक्दै छन् कस्मिक इन्टरनेशनल एकेडेमीका ८/९ बर्षे स्कुले विद्यार्थी, के हेर्दै छ विद्यालय ? – Nepal Parikrama
कलम समाउन सिक्ने हातहरूले चुरोटका खिली समाउन सिक्दै छन् कस्मिक इन्टरनेशनल एकेडेमीका ८/९ बर्षे स्कुले विद्यार्थी, के हेर्दै छ विद्यालय ?
बाबुराम तिमिल्सिना । यो कुरा पढ्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर म वास्तविकता लेख्दै छु । सात आठ बर्षका स्कुले बच्चा स्कुलमा पढ्न जान्छन् यो धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर पछिल्लो समय आफ्ना बाल बच्चा स्कुलमा पढेर मात्र घर फर्ककिन्छन् भन्ने कुरामा अब ढुक्क नभए हुन्छ । गत मंसिर २१ गते मङ्गलबारको दिन अपरान्ह ४ बजेतिर म सहित मेरा दुई जना साथी कोटेश्वरको गी्रन ल्याण्ड फुड क्याफेमा खाजा अर्डर गरेर बसिरहेका थियौ । हामी खाजाको पखाईमा बसिरहँदा त्यहाँ एक हुल साना–साना विद्यार्थी भाइबहिनी आए । ती मध्ये अधिकांश ८/९/१० बर्षका जस्ता देखिन्थ्ये भने दुई चार जना ११/१२ बर्षका जस्ता पनि देखिन्थ्ये ।
झण्डै १२/१३ जनाको संख्यामा आएका ति विद्यार्थीहरू क्याफेको सेपरेट रूमतिर छिरे, जुन सेपरेट रूम चारैतिरबाट सिसाले घेरिएको थियो र वीचमा एक ठाउँबाट छिर्ने ढोका थियो । त्यतिकैमा हाम्रो खाजा आइपुग्यो । मैले खाजातिर ध्यान दिन थाले । मलाई लाग्यो विद्यार्थीहरू केही काम परेर गु्रपमा क्याफेमा छलफलका लागि आएका होलान् । त्यसरी आएका केटाकेटीमा झण्डै ७/८ जना केटा र ४/५ जना केटी थिए जुन कुरा मैले पछि याद गरे । जब मैले खाजा खान शुरू गरे मेरा अरू २ जना साथीहरू चारैतिरबाट बन्द सेपरेट रूमको ढोकाबाट ति विद्यर्थीहरूलाई हेर्न थाले । खाजा नखाई साथीहरूले ति विद्यार्थीतिर अचम्म मानेर हेर्न थाले । अनि साथीहरूले मलाई पनि उता हेर न भनेर साउती गर्न थाले । अनि म टाउकोलाई पुरै बटारेर विद्यार्थीतिर हेर्न थाले । ति विद्यार्थीहरू धमाधम चुरोट तानिरहेका थिए । त्यसपछि त म पनि चकित नै परे । गु्रपमा आएका सबै विद्यार्थी पालै पालो चुरोट तानिरहेका थिए । त्यसपछि मैले साथीलाई मोवाइलबाट उनीहरूको फोटो खिच्न लगाए । स्कुले विद्यार्थीहरू सेपरेट रूपमा बसेकाले ढोकाबाट उनीहरूले चुरोट खाइरहेको दृश्य खिच्न मेरो साथीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको थियो । आएको १५/२० मिनेटपछि ति विद्यार्थी चुरोट मिसन पुरा गरे फर्किन लागे । अनि मैले तिनीहरूले लगाएको स्कुल ड्रेसतिर हेरे । ड्रेसमा कस्मिक इन्टरनेशनल एकेडेमी लेखिएको थियो । मैले तुरून्तै मो वाइलको डाटा अन गरेर गुगलमा स्कुलको नाम सर्च गरे ।
स्कुल लोकेशन र फोन नम्बर पत्ता लगाए । विद्यार्थी क्याफेबाट निस्कीसकेपछि स्कुलको नम्बरमा फोन लगाए तर फोन उठेन । स्कुलका नाममा रहेको त्यो नम्बरमा मैले पटक–पटक फोन गरे र पनि उठेन । फोन नउठेपछि मैले भोलीपल्ट फोन गर्ने सोच बनाएर साथीहरूसँग छुटिए । मैले भोलीपल्ट पनि गुगलमा भेटेको त्यो नम्बरमा पटक–पटक फोन गरे, उठेन । फोनबाट मैले त्यो स्कुलको प्रशासनलाई ति विद्यार्थीहरूको गतिविधि जानकारी गराउन चाहेको थिए । फोन नउठेपछि म त्यो जानकारी गराउन म असफल भए । फोन गर्दा गर्दा नउठेपछि ह्या भै गो छाडिदिउँ जस्तो मलाई लाग्यो र मैले पछि सम्पर्क ग र्न चाहिन । त्यसको केही समयपछि मात्र म साथीलाई भेट्न त्यही क्याफे अगाडि गएको थिए । त्यो दिन पनि त्यही स्कुलका अधिंकाश तिनै र एका दुई फरक विद्यार्थी मैले साथीलाई कुर्दा कुर्दै क्याफेबाट बाहिर निस्के । मेरो मनमा झन् चिसो पस्यो । फेरी गुगलमा गएर त्यो स्कुलको नम्बर खोजी फोन गरे तर त्यो नम्बरमा उठेन । सायद त्यो नम्बर हैन होला जस्तो लाग्यो ।
मलाई अब विद्यार्थीहरूको त्यो हरकतमा विषयमा थप जान्न मन लाग्यो मैले क्याफेमा बस्ने कर्मचारीसँग सोधे । यसरी यि विद्यार्थी किन यहाँ आउँछन् ? कहिलेदेखि आउँन थालेका हुन ? तपाईले यति साना बालबालिकालाई किन चुरोट दिनुभएको हो ? क्याफेमा बस्ने कर्मचारीले भन्यो – ‘यो यिनीहरूको जक्सन हो, कहिलेकाँ हि सधैजसो र कहिलेकाँही दुई चार दिन विराएर आउँछन्, चुरोट मागेसी नदिएर के गर्नु, पैसा त तिरेकै छन्, यिनीहरू ग्राहक भएर आएपछि हामीले सेवा गर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र’ । त्यसपछि मैले क्याफेको कर्मचारीलाई अब यिनीहरू कहिल्यै आउँछन् भनेर सोधे । उनेले उसले भन्यो ‘दुई तीन दिनमा यहि समयमा’ । फेरी म त्यसको तीन दिनपछि त्यहाँ त्यही समय गए र क्याफेको त्यही कर्मचारीलाई सोधे आज विद्यार्थी आउँछन् कि नाई ? उस्ले जवाफ दियो ‘उनीहरू त हिजै आएर गइसके । मैले थाहा पाए कि म पो ढिला भएछु ।
यो पटक अनि मलाई फोन गर्न मन लागेन न त मलाई स्कुलमा पुगेर नै प्रिन्सिपलाई भन्न लाग्यो । सोचे अब यो कुरा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्छ । कतै अन्य स्कुलहरूका कलम समाउने कलिला विद्यार्थीहरू त चुरोट खिली समाउन त सिक्दै छैनन् ? आफैलाई प्रश्न गरे । बालबालिका स्कुलमा हुँदा स्कुल नै उनीहरूको परिवार हो ।
स्कुलमा बालबालिकाको रेददेख स्कुल ले नै गर्नुपर्छ । आफ्ना विद्यार्थी त्यसरी स्कुल ड्रेसमा नै चुरोट खादै हिड्दा किन कस्मिक इन्टरनेशनल एकेडेमीले ध्यान पुर्‍याउन सकेन ? विद्यार्थीबाट पढाइका नाममा महँगो शुल्क लिने तर विद्यार्थी ख्याल पो स्कुलले गर्न नसकेको होकी ? कि अन्य निजी स्कुलमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पनि अभ्यास यस्तै छ ? खोजीको विषय बनिरहेको छ ।
Published On: २९ पुष २०७३, शुक्रबार १०:२१